Horoscope Archives - Baganthar
When You See Lizard, These Factors Should Be Notice
Bagan Thar Dec 04
The lizard is usuallyasmall reptile in the home. The barking of the knuckles often screams. Some rodents brush once every two to three days. If so, you will be well! May we have ...
Be careful with these tips when wearingadiamond
Bagan Thar Oct 31
Be careful with these tips when wearingadiamond… If anyone wearsadiamond, it should be worn only in the middle finger. Exceptionally, wearawedding ring on the wrist. It is unfortunate that ...
“A fast-track debt recovery facility and the money that comes in automatically”
Bagan Thar Oct 29
“A fast-track debt recovery facility and the money that comes in automatically” You can also pay back this debt quickly. Income can also be increased. There is alsoasignificant increase in income. The easy ...
ကားဆွဲကောင်းစေတဲ့ ယတြာ တစ်နေ့သ၌ ဆရာဇင်ယော်နီနှင့် ကျွန်တော်တို့သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ အပတ်စဉ်တိုင်း သွားနေကျခရီး ဖြစ်သော Sky Net ရှိ mntv ရိုက်ကူးရေးစတူဒီယို သို့သွားနေစဉ် ဆရာ့ထံသို့ ဖုန်းတစ်ကော ဝင်လာ လေသည်။ ဆရာသည် ဖုန်းကို စပီကာဖွင့်၍ ပြောနေ သဖြင့် ဘေးမှ ကျွန်တော်တို့လည်း ကြားနေရသည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင် ထိုသူက ဆရာ့ဆီကို အရင် က ဗေဒင်လာမေးဖူးကြောင်း ပြောပါသည်။ ထိုသူ ...
မိမိဘာနက္ခတ်လဲ တွက်နည်း၊ နက္ခတ်တို့၏ ထူးခြားချက်များနှင့် လိုက်နာရမည့်အချက်များ
မိမိတို့၏ မြန်မာ မွေးသက္ကရာဇ် ကို (၃) နဲ့စား ၁ ကြွင်းလျှင် “နတ် နက္ခတ်” ၊ ၂ ကြွင်းလျှင် “လူ နက္ခတ်” ၊ ၀ ကြွင်းလျှင် “ဘီလူး နက္ခတ်” ဖြစ်သည်။ “နတ် နက္ခတ်” ထို နက္ခတ် ပိုင်ရှင် တို့သည် လူဖြောင့်စိတ်တိုများဖြစ်ကြသည် မိမိသာမှန်ပါစေ ငြိမ်ခံလေ့မရှိဘဲ မှန်ရာကို အားမနာတမ်း ပြောဆိုဝံ့သည်။ အပြိုင်အဆိုင်ပြုလုပ်ရခြင်းနှင့် တိုက်ခိုက်ရခြင်းကိုပျော်မွေ့သူဖြစ်သည်။ ...
“အိမ်မက်မက်ခြင်း ဆိုင်ရာ နိမိတ်များ အဟော” (ဆရာဟိဏ်းမိုးထက်)
“အိမ်မက်မက်ခြင်း ဆိုင်ရာ နိမိတ်များ အဟော” “အိမ်မက်မက်သောအခါ (၄) ပါး” ၁။ နေ့အခါမက်ခြင်း (မှန် – မမှန်) ၂ပါး ၂။ ညဉ့်ဦးယံမက်ခြင်း (မှန် – မမှန်) ၂ပါး ၃။ မိုးသောက်ယံမက်ခြင်း – (အမှန်) ၄။ အာရုဏ်တတ်မက်ခြင်း – (အမှန်) “တစ်နည်း အိမ်မက်သောအခါ (၅) ပါး” ၁။ ညဉ့်ဦးယံမက်ခြင်း ၁ နှစ်အတွင်း ...
“အသားလှုပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ နိမိတ်များ အဟော” (ဆရာဟိဏ်းမိုးထက်)
Bagan Thar Sep 30
“အသားလှုပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ နိမိတ်များ အဟော” (၁) ဦးခေါင်းလှုပ်ခြင်း – ကျွန်၊သူများခိုင်းတာလုပ်မည်။ (၂) ဦးရေလှုပ်ခြင်း – အဖျားအနာဖြစ်မည်။ (၃) ထိပ်လှုပ်ခြင်း – မင်း ၊ အကြီးအကဲ ပူဇော်ရသည်။ (၄) နှာခေါင်းလှုပ်ခြင်း – ချစ်သူရ ၊ချစ်သူများသည်။ (၅) အထက်နှုမ်းခမ်းလှုပ်ခြင်း – ရန်ဖြစ်ရမည်။ (၆) အောက်နှုမ်းခမ်းလှုပ်ခြင်း – အမြိန်အရသာ၊အစားကောင်းစားရမည်။(အဝေးစကားကြားရမည်) (၇) မေးဖျားလှုပ်ခြင်း – ...
“ငွေကြေးကံ တစ်သက်တာလုံး မြင့်မားစေရန်” – ဟိန်းထက်ဇေယျာ (အယူတော်မင်္ဂလာ)
Bagan Thar Sep 28
“ငွေကြေးကံ တသက်တာလုံး မြင့်မားစေရန်” ဒီတစ်ခါတော့ မိမိအတွက်ငွေနံမြင့်နေစေရန် တစ်သက်တာပတ်လုံးအတွက် စီရင်ထားလို့ရတဲ့ ဓါတ်ယတြာအနေနဲ့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်… ဝင်ငွေတိုးတက်လိုသူများ၊ ငွေကြေးစီးပွားဖြစ်ထွန်းလိုသူများ၊ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကံကောင်းလိုသူများအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ပါတယ်… တနင်္ဂနွေသားသမီးများ – တစ်သက်တာပတ်လုံး ငွေကြေးကံမြင့်မားစေရန် အင်ကြင်းသားကို အပြားငယ် ပြုလုပ်၍ နေအိမ် ဘုရားစင်မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၉ ၃၀ မှာ ဆင်းတုတော် အောက်ခံအဖြစ်ထား၍ ပူဇော်ပါ။ အင်ကြင်းသားကို ပလ္လင်အဖြစ် ပူဇော်နိုင်ပါက ...
သစ်သားတံခါးဆရာတော်၏ “မြေ” ပိုင်ရှင်၊ “အိမ်” ပိုင်ရှင် ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နည်း
Bagan Thar Sep 06
မြန်မာ ဂမ္ဘီရ လောကီဝိဇ္ဇာ ဓရ ပညာဖြင့် ” မြေ” ပိုင်ရှင် ” အိမ်” ပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နည်း… သစ်တံခါးဆရာတော်၏ ရေးသား ဖော် ပြချက် အား အဓိဋ္ဌာန် ကျင့်ဆောင်ပုံ တင်ပြပေးခြင်းပါ။ မိမိ မှာ အိမ်ပိုင်ရှင် မြေပိုင်ရှင် ဖြစ်လိုပါက .. နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ထမင်းစားသောက်သည့်အခါ မိမိစားသုံးနေသော စားပွဲ မှ ၎င်း .. တစ်နေရာ တွင် ...
ဘယ်အချိန်မှာ ယတြာပြုလုပ်သင့်သနည်း… “ယတြာအချိန် လမ်းညွှန်” (မင်္ဂလာဦးရွှေအိုး)
Bagan Thar Sep 02
“ဘယ်အချိန်မှာ ယတြာချေရမလဲဆရာ” ကာယကံရှင်၏ မွေးသက္ကရာဇ် နေ့နံတို့ကို အခြေပြုပြီး သကာလ အစစအရာရာ တွက်ချက် စစ်ဆေးပြီး မြင်သမျှကို ဟောပြောရရုံမက ကာယကံ ရှင်၏ သိလိုသော အချက်တို့အား ချင့်ချိန်နှိုင်းဆ ဖြေကြားရသည်မှာ ဗေဒင်ဆရာတစ်ဦး၏ အလုပ် ဖြစ်ပါသည်။ မြင်တာတွေဟော၊ သိလိုသမျှ အမေးတွေ ကို ဖြေပြီးသည့် သကာလ အဆိုးအညံ့တွေ ပျောက် စေဖို့၊ အတိုက်အခိုက်တွေ တွန်းလှန်အောင်မြင်နိုင် ဖို့၊ ကြံစည်တိုင်းပြီးမြောက်ဖို့၊ လာဘ်လာဘ ...